Tian’ity Syriana Mpitsoa-ponenana ao Etazonia Ity Ho Fantatry Ny Amerikana Ireo Dingam-Panadihadiana Nandalovany Vao Nahafahany Nonina Tao Amin’ny Firenen-dry Zareo · Global Voices teny Malagasy
Tian'ity Syriana Mpitsoa-ponenana ao Etazonia Ity Ho Fantatry Ny Amerikana Ireo Dingam-Panadihadiana Nandalovany Vao Nahafahany Nonina Tao Amin'ny Firenen-dry Zareo
Voadika ny 01 Novambra 2016 14:55 GMT
Vakio amin'ny teny русский, Español, Nederlands, bahasa Indonesia, 繁體中文, 简体中文, English
Asmaa Albukaie, mpitsoa-ponenana Syriana voalohany ao Idaho, ao amin'ny tranony vaovao. Sary: Asmaa Albukaie
Tamin'ny 20 oktobra 2016 no nivoahan'ity tantara ity voalohany tao amin'ny PRI.org ary i Jason Margolis no nanoratra azy. Nozaraina eto indray noho ny fifanarahana fifampizarana votoaty.
14 taona i Asmaa Albukaie no nanambady. Nanan-janaka roa izy tamin’ izy 15 taona. Avy eo nandray dingana tsy mahazatra ho an'ny reny Syriana mijanona ao an-trano izy: nanao sonia hahazoana diplaoma oniversitera amin'ny siansa fitehirizam-boky any Damaskosy.
“Nanamarika aho fa manapa-kevitra amin'izay hevitra tiany tapahana ny vehivavy amin'ny sarimihetsika, ireo vehivavy Amerikana. Tsy azo ekena ao Syria izany. Ka naka fanapahan-kevitra manokana aho mba hahafantatra sy hianatra, saingy niafina tao amin'ny efitra fandroana aho satria tsy namela ahy hianatra ny vadiko, “hoy i Albukaie, mihomehy momba izany ankehitriny.
Nilaza tamiko momba ny tantarany tao amin'ny toeram-pisotroana kafe tao afovoan-tanànan'i Boise i Albukaie, niresaka nandritra ny 90 minitra izahay. Mandray mpitsoa-ponenana Syriana marobe ny tanànan'i Boise, tanàna renivohitry ny fanjakana avaratra-andrefan'i Idaho: mpitsoa-ponenana 122 hatreto tamin'ity taona ity. Avo roa heny noho ny ao Los Angeles, Boston sy New York mitambatra izany.
Mpitsoa-ponenana Syriana voalohany tonga tao Idaho tamin'ny Novambra 2014 i Albukaie sy ny zanany lahy tanora anankiroa .
Nampiantrano mpitsoa-ponenana marobe, avy amin'ny firenena marobe i Boise, noho ny filàna mpiasa sy ny fahamoranan'ny trano fonenana ao Idaho vitsy mponina.
Nilaza tamiko tamin'ny antsipiriany maro momba ny fiainany tany Syria i Albukaie, ary nangataka tamiko mba tsy hizara ny ampahany sasany amin'ny resakay. Te hiaro ny fianakaviany izay mbola any amin'ny firenena rotidrotiky ny ady izy – fomba fiarovana nianarana mba ho velona izany, fa tsy mitsikera na iza na iza.
“Raha niteny tamin'ny fomba ratsy aho, dia tsy nahita ahy velona eto ianao,” hoy izy.
Ity no zavatra nolazainy ka azoko zaraina: nisy naka an-keriny ny vadin'i Albukaie sy ny zanany roa lahy kely. Tsy nahita ny vadiny intsony izy. Saingy tafaverina tany aminy ireo zanany lahy ary namonjy an'i Jordana avy hatrany izy ireo, avy eo nankao Egypta, ary nangataka ny satan'ny mpitsoa-ponenana tamin'ny alalan'ny Firenena Mikambana.
Mifantoka amin'ny fanomezana toeram-ponenana ho an'ireo tranga tena marefo voalohany indrindra ny Firenena Mikambana, ary nahafeno fepetra izy amin'ny maha- reny tokan-tena azy. Roa taona taorian'ny fanadihadiana sy ny fanamarinana ny tantara tany aloha, nahazo tapakila hisidina ho any Etazonia izy.
“Ary voasoratra tao amin'ny zotra-piaramanidinako ny hoe: ‘Boise, ID,’ izay Idaho, izay fantatro ankehitriny. Saingy mbola tsy fantatro taloha. Ary nijery momba izany tao amin'ny google aho, “hoy izy.
Mazava ho azy, tetezamita sarotra ny hoe mpitsoa-ponenana Syriana voalohany indrindra ao amin'ny fanjakana manontolon'i Idaho.
“Ny tena sarotra indrindra? Ny zava-drehetra, “hoy i Albukaie. “Mianatra ny fomba fandoavana faktiora, mianatra ny fomba familiana fiara satria nahazo fiara misy vitesy afindrafindra aho. Mivazavaza ahy eny afovoan'ny arabe ny olona satria maty ny fiarako. Miantso ahy amin'ny anarana, adala, sy ny ‘teny F_’ ary teny tena ratsy ry zareo. Nitsiky fotsiny aho ary nilaza hoe: Miala tsiny aho, mpamily vaovao vaovao aho, sambany aho mitondra fiara.”
Fanomezana no nahazoan'i Albukaie ilay fiara. Nilaza izy fa tsy mba namily fiara tany Syria satria mety taminy ny fiara iombonana, ka tsy nilaina ny fiara.
Amin'ny ampahany, noho ireo sarimihetsika Amerikana rehetra nojereny, nanome asa azy ho mpandika teny ny fifehezan'i Albukaie haingana ny teny Anglisy. Taorian'ny volana vitsivitsy tao Boise, voaray ho mpiandraikitra misahana ny fanomezana toeram-ponenana amin'ny fanampiana ny mpitsoa-ponenana hafa tonga avy amin'ny firenena manerana izao tontolo izao.
Vetivety no namitany lalandavitra. Tamin'ny volana lasa, nahazo voninahitra tao amin'ny Trano Fotsy i Albukaie noho ny asam-panentanana nataony, miaraka amin'ireo mpitarika fiarahamonina mpitsoa-ponenana fito hafa, izay tafiditra amin'ny Welcoming Week, lanonana tarihin'ny Welcoming America, fikambanana mampiroborobo ny fomba vaovao hampidirana mpifindra monina ao anatin'ny fiarahamonin'i Etazonia.
Ankehitriny, nilaza i Albukaie fa mahatsiaro tahaka ny nahazo jackpot izy monina ao Idaho
“Voalohany indrindra, mahafinaritra eto, tena mahafinaritra sy maitso. Ary manana namana mahafinaritra ihany koa aho eto, miasa aho, ary voaaro. Izany no zava-dehibe indrindra. Nandao ny fireneko aho satria tsy voaaro, ary tonga teto aho noho ny filaminana sy ny fiarovana, “hoy izy.
Ankoatra ireo mpitondra fiara tezitra, nilaza i Albukaie fa fiarahamonina tia mandray olona i Boise. Miresaka ny antsipiriany madinika mahatonga an'i Boise amin'izany lalana izany izy; ohatra, nanasa azy tany an-tranon'izy ireo ny fianakaviana Jiosy iray tamin'ny Androm-Pisaorana (Thanksgiving).
Saingy niova izany hafanana izany. Manao hijab i Albukaie, ary nilaza izy fa nitabataba azy sy niantso azy ho “mpampihorohoro” ny olona. Nanafika ny zanany lahy 16 taona ny lehilahy iray vao haingana.
“Niaraka tamin'ny namany izy, ary nanontany azy ity namana Amerikana ity hoe: ‘Miozolomana ve ianao?’ Hoy ny zanako lahy hoe: ‘Eny, Miozolomana aho.’ Ary nomeny totohondry ny tavany.”
Voasambotra sy voampanga teo ambanin'ny lalànan'ny heloka bevavan'ny fankahalana ao Idaho ity mpiherisetra ity.
Tsy te hitsikera mpanao politika Amerikana noho ny fankahalana hatrany ny Miozolomana i Albukaie. Matahotra izy sao miteny zavatra diso, ka mety ho voaraoka. Tsy tokony hitranga izany raha araka ny lalàna.
Niresaka tamiko i Albukaie satria nilaza izy fa tiany mba hahatakatra ireo dingana fanadihadiana mpitsoa-ponenana afaka monina ao aminy ny Amerikana. Hadihadian'ny Firenena Mikambana aloha ny mpangataka [toeram-ponenana] rehetra, avy eo ataon'ny sampan-draharaham-panjakana Amerikana telo fanadihadiana indray: ny Departemantam-panjakana, ny Departemantan'ny Fiarovana ny Tanindrazana, ary ny Minisiteran'ny Fahasalamana sy ny Fanampiana Maha-Olona.
Amin'ny ankapobeny, maharitra 18 hatramin'ny 24 volana ny dingana hanekena Syriana mpitsoa-ponenana, rehefa afaka amin'ny sakantsakana rehetra ny mpangataka. Manodidina ny 10.000 eo ireo Syriana mpitsoa-ponenana neken'i Etazonia tao anatin'ny 12 volana. Nilaza ny kandidà Demaokraty ho filoham-pirenena, Hillary Clinton fa tiany hampitomboina ho 65.000 ny fandraisana isan-taona.
Nilaza ny kandidà Repoblikana ho filoham-pirenena, Donald Trump fa tsy mahafantatra na inona na inona mombamomba ny Syriana mpitsoa-ponenana izahay. Tamin'ny adihevitra fahatelo teo amin'ireo kandidà ho filoham-pirenena tamin'ny Alarobia hariva, namerina nilaza izany indray i Trump rehefa niresaka tamin'i Clinton.
“Maka Syriana mpitsoa-ponenana an'aliny i [Clinton], izay mety amin'ny lafiny maro, na tsia angamba, ary misy koa ireo tsy miara-milahatra (tsy mitovy hevitra) amin'ny ISIS mihitsy. Ary manana azy ireo eto amin'ny firenentsika isika ankehitriny. Ary mahandrasa kely fa io no ho Soavalin'i Troie [tantara grika tsy hain'ny maro amin'ny Malagasy?] goavana. Ary miandrasa mandra-pahitanao izay hitranga afaka taona vitsivitsy, “hoy i Trump.
“Izany no mahatezitra ahy, satria tiako ny firenena, tiako i Amerika,” hoy Albukaie. “Reniko ity firenena ity. Raha nilaza i [Trump] fa tonga tsy misy antontan-taratasy ny Syriana, tokony hijery ny antontan-taratako sy ny an'ny olon-kafa izy, be dia be izany antontan-taratasy izany. Nandalo fanadihadiana marobe izahay, nandalo fanamarinana be dia be momba anay izahay … Fanadihadiana maherin'ny 10, ary mampatahotra sy tsy mampahazo aina ny ankamaroan'izy ireo, natao tao anaty efi-trano kely, tsy misy varavarankely, tahaka ny amin'ny famotorana.
“Mampatahotra satria manontany zavatra betsaka izy ireo, ary fanontaniana mahasadaikatra marobe. Toy ny hoe ‘valio eny na tsia, te hidaroka fiaramanidina amin'ny baomba ve ianao?’ “
Nanontany an'i Albukaie aho: Ahoana ny amin'ireo olona matahotra Miozolomana avy any Syria? Ahoana no hanomezanareo toky azy ireo fa tsy mpampihorohoro ianareo?
“Raha miteny ahy hoe ‘mpampihorohoro'… rehefa mitsiky aho ary manofa tanana sy miarahaba, dia miova avy amin'ny fahadalana ny tarehin'izy ireo ary lasa sariaka, tony kokoa,” hoy i Albukaie. “Mino aho fa ny fihetsiky ny Miozolomana no afaka manova ny eritreritry ny Amerikana momba ny Miozolomana.”
Nandray anjara tamin'ny TED Talk tao Moskoa, Idaho i Albukaie vao haingana, ka maro ireo olona afaka mahafatantra Syriana mpitsoa-ponenana iray.